Nogadrain’ny Governemanta Venezoeliana Ireo Mpamokatra Lahatsary Noho Ny Fiampangana Azy Ireo Ho Mikotrika Fikomiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2016 4:20 GMT
Pikantsary tamin'ny lahatsary notontosain'ireo mpamokatra: Marco Trejo, César Cuellar ary James Mathison ho an'ny antoko politika mpanohitra Primero Justicia.
Nogadrain'ny polisy ara-politika tamin'ny 20 Septambra ireo Venezoeliana mpamokatra lahatsary Marco Trejo, Cesar Cuellar ary James Mathison noho ny lahatsary novokarin'izy ireo ho an'ny antoko politika Primero Justicia fotoana fohy taorian'ny famoahana azy tamin'ny media sosialy sy ny fahitalavitra.
Nosamborin'ny [Tale Jeneralin'ny Fitsikilovana ny Fitsikilovan'ny Tafika] i Marco Trejo, César Cuellar ary i James Mathison taorian'ny famokaran-dahatsary ho an'ny [antoko politika mpanohitra Primero Justicia] momba ny miaramila.
Mampiseho tovovavy mikarakara ny reniny ary avy eo mitady fanafody sy ny sakafo an-trano mangadihady ny lahatsary. Mandefa hafatra an-tsoratra ho an'ny manamboninahitra miaramila iray izy, angamba ny rainy, mijoro eo anoloan'ireo mpanao hetsi-panoherana marobe. Ao anatin'ny mozika miha mafy, afaka mandre ny feon'ilay tovovavy isika raha eo am-pamakiana ny soratra ao amin'ny findainy izy. Hoy ilay zazavavy:
Dada, mbola marary i mama ary lany ny fanafody.
Handeha hiandry filaharana aho fa tsy misy sakafo ato an-trano.
Tsarovy fa miaina zavatra tahaka izany iainantsika izany ihany koa ireo olona nandefasana anao hogejaina.
Mazava fa lazaina ho avy amin'ny Primero Justicia ny lahatsary, izay feno fahasahiana amin'ny fanehoana ny toe-draharaha iainan'ny Venezoeliana maro amin'izao fotoana.
Manana didy fampisamborana ho an'ilay mpamokatra lahatsary faha-efatra, Andrés Eloy Moreno Febres-Cordero ihany koa ny manampahefana. Voampanga noho ny fanevatevana izay lazain'ny Fehezan-dalàna Itsarana araka ny fomba Miaramila ireo mpamokatra lahatsary efatra ireo, anisan'izany ny fanevatevana ny Tafika sy ny fandrisihana fikomiana.
Nanambara tao amin'ny Youtube i Julio Borges, Mpandrindra Nasionaly ny antoko politika Primero Justicia fa nosoniavin'ny antoko ny fifandraisana rehetra ary fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana ny fanagadrana azy ireo, ka tsy anisan'ny fitarihana heloka bevava mihitsy izany. Na dia teo aza izany, hotsarain'ny fitsarana miaramila ireo mpamokatra lahatsary, fitsarana fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fitsarana mahazatra sy tena izy. Araka ny voalazan'ny Fehezan-dalàna momba ny Fitsarana Heloka Bevava ao Venezoela, dia tsy azo tsaraina eo anatrehan'ny mpitsara miaramila ny sivily, raha tsy hoe amin'ny tranga manokana miavaka vitsivitsy izay tsy mihatra amin'ity raharaha ity.